AmaProteas agxile kwi-series whitewash
AmaStandard Bank Proteas asegxile ekunakeni i-series whitewash kumdlalo weTest wesithathu bedlala neSri Lanka ozoqala eBidvest Wanderers Stadium ngoLwesine bengaphambili ngo-2-0 kulandela ukunqoba ngama-runs angu-282 ePPC Newlands ngesonto elidlulile, kodwa bafuna ukuqhubeka nomsebenzi wabo, ikakhulukazi enkundleni ehambelana namakhono abo.
Iqembu lizosizwa ukwazi isimo sendawo kusukela kubadlali abadlalela ama-bizhub Highveld Lions eqenjini, njengovula umdlalo, uStephen Cook, osedlale iminyaka engu-17 kwikhilikithi ye-First-Class enkundleni. Nokho bekunemvula endaweni yangakhona ezinsukwini ezidlulile, uCook ulindele i-wicket 'e-traditional' yaseWanderers, ezohambelana nokushesha kwamaProteas.
"Singathanda ukuyinqoba yonke imidlalo," uCook ekhuluma nezintatheli eGoli. "Siphuma kumhlangano weqembu lapho sikhulume ngokubaluleka kwa-2-0, nokuqeda umsebenzi. Sakhuluma ngakho eAustralia futhi asiwenzanga umsebenzi emuva kokuthola i-whitewash kwi-series yama-one-day. Yinto yokuqala nephambili ezinqondweni zabadlali, siyazi ukuthi isimo sihambelana nathi futhi besidlala ikhilikithi enhle futhi uma kuqhamuka amathuba okuthi sibuse kanje, yilokho esifuna ukwenza."
"Kujwayelekile lapho, i-wicket, ikakhulukazi kule-season, kunama-cracks ambalwa," esho echaza. "Ikakhulukazi uma yomile, isimo sezulu esimanzi singawagcina ehlangene. Ingabakhona i-pace ne-bounce. Kungahamba kancane uma kuqala umdlalo kodwa usuku lwesibili nolwesithathu luyashesha."
Lomdlali oneminyaka engu-34 uthi kuzoba "ukufezeka kwephupho" ukudlala enkundleni yakhe yasekhaya, ezohamba phambili ekubambeni umdlalo weTest wesi-100 kaHashim Amla kwi-South Africa. Ucela abalandeli bafike bazosekela amaProteas, okuzophinde kube umdlalo weTest wokugcina kwi-season ozodlalelwa ekhaya.
"Ukufezeka kwephupho ngempela," kusho uCook. "Ikhaya lami lesibili leli, ngakhula khona la futhi kusezincwadini ukuthi umsebenzi wami ngawenzela lapha. Ukwazi ukuphuma ngidlale umdlalo weTest lapha, ngidlalele iSouth Africa kuhle. Ayikho enye incindezi, incindezi yokuthi umdlalo weTest kuphela."
"Sezabaningi izinsuku ngihleli lapha, ngidlala enkundleni engenabantu, ngicabanga ukuthi kungaba indawo enhle yokudlala phambi kwenkundla egcwele. Ngithemba ukuthi abantu bazofika bezosekela lomdlalo weTest futhi leyongxenye yephupho ingafezeka."
uBehardien uzohola amaProteas kwiT20 series Abaphosela amaProteas babheke ukunqoba okuzobanqobela i-series uPhilander noRabada bavula indlela kusekusha Iphupho laseNewlands liqhubekela uPhilander uRabada noPhilander bamangaza iSri Lanka Ikhulu laElgar lisuse ukucasuka kwakhe uElgar noDe Kock bahambisa usuku lokuqala ngendlela yeSouth Africa uAbbott uhlaselile ukuze aqedele ukunqoba kwamaProteas Abaphosi bazimisele ngobunzima ngosuku lokugcina Rabada, Mendis go head to head in a clash of young titans uRabada noMendis bayaqhudelana njengentsha enamandla